Mutongi anorova pasi CDC 'mamiriro ekufamba nechikepe' kurwisa nzira dzezvikepe
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kurwisa » Mutongi anorova pasi CDC 'mamiriro ekufamba nechikepe' kurwisa nzira dzezvikepe
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Kurwisa • Hurumende Nhau • Health News • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Mutemo uyu unotanga kushanda muna Chikunguru 18, panguva iyo maCDC anoraira vafambisi vengarava vanozotorwa senge kusungwa, kurudziro kana nhungamiro, saka ngarava dzechikepe dzinogona kukurumidza kubuda muFlorida zvakare.
Florida Gavhuna anozivisa kukunda pamusoro peCDC.
Florida yakamhan'arira CDC nekuda kwekukuvara kusingagadzirisike mushure mekunge dzimwe nzira dzezvikepe dzakatyisidzira kusiya nyika.
Mutongi wedunhu reUS anopa chikumbiro cheFlorida chekuvharira CDC “zvine mutsindo kufamba nechikepe”
Florida Gavhuna Ron DeSantis akarova kukunda kukuru mudare vachipesana neCenters for Disease Control and Prevention nezuro, apo Mutongi weDunhu reUS Steven Douglas Merryday akapa chikumbiro cheFlorida chekuvhara CDC "Mamiriro echikepe" odhiraini kumigwagwa yechikepe nezuro.
"CDC yanga ichikanganisa nguva yose iyi, uye vaizviziva," akadaro DeSantis achizivisa danho iri.
"CDC nehutungamiriri hweBiden vakatora hurongwa hwekunyudza maindasitiri echikepe, vachihwanda kumashure kwekunonoka kwehutongi nematare. "Nhasi, tiri kuwana kukunda uku kumhuri dzeFlorida, indasitiri yezvikepe, uye nyika dzese dzinoda kuchengetedza kodzero dzayo pakatarisana nekuparadzwa kusati kwamboitika."
Florida yakamhan'arira CDC nekukuvara kusingagadzirisike mushure mekunge dzimwe nzira dzekufamba rwendo dzakatyisidzira kusiya nyika nekuda kwenzvimbo dzinotyisa uye dzinorema dzakaiswa muna Gumiguru 2020 uye dzakavandudzwa muna Kubvumbi. Pakati pezvimwe zvinhu, CDC yaida vafambisi vezvikepe kuti vavake ma laboratories ekuyedza, voitazve masisitimu emhepo, uye vane 98% yevashandi uye 95% yevatakurwi - kusanganisira vana - vakabaiwa kuitira kudarika chinodikanwa. kune dzakateedzera ngarava kutanga.
Mutongo-wemapeji gumi nemaviri wakaita kunge wakagadzirirwa kumisikidza kuongororwa kweDare Repamusorosoro, ichiratidzira majaji mazhinji, masekete akambotongwa, nyaya nemutemo, uye kunyangwe nhoroondo yeCDC nekuisa vanhu voga. Mutongi Merryday akaisa pakunzwisisa kweCDC nezvechiremera chayo, zvakadaro, achitaura kuti magweta ayo akaramba achitsanangura "kubuda" sechiitiko chimwe chete chekutapurirana hutachiona hwevanhu.
Nekuita izvi, CDC inoti ine masimba ekumanikidza nyika chero zviyero, zvichibva pakufunga kwemutungamiriri wayo "zvinodikanwa," yakanyora Merryday, achiiti "chinhu chinoshamisa, chisati chamboitika, uye chirevo chine masimba."
"Mumwe akasara achishamisika," mutongi akanyora, kuti CDC ingadai yakaedza here "kazhinji kuvhara bonde" muUS kudzivirira hutachiwana hweAIDS, syphilis kana herpes. "Kuchenjera kwezvematongerwo enyika (uye kunetsekana kwekumanikidza) kungapa zano CDC pamusoro pechirambidzo ichi, asi mutemo, sekunzwisiswa neCDC, haugadzire chipingamupinyi," akadaro asati aenderera mberi nekuramba kunzwisiswa uku.
Merryday akatotaura mutongo waMay nemumwe waaishanda naye muDDC, Mutongi Dabney L. Friedrich, uyo aingove nemapeji makumi maviri kana kupfuura asi akapokana nekodzero yeCDC yekumanikidza kurambidzwa kwevanobvisa renti munyika.
Vanopfuura mamirioni gumi nematatu vafambi uye vafambi vakapinda kana kudzika muFlorida mu13, vachichengetedza hupfumi hwenyika. Kudzoka kwemaindasitiri echikepe kuchave "chiitiko chakakosha pakurwira rusununguko," akawedzera DeSantis, achinongedzera kuti Florida "inoramba ichibudirira ichivhurira bhizinesi."